Sida loo aqoonsado naf saaxiibkiisa, dadka qaba fiirin kasta oo ay dareemaan?
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Sida loo aqoonsado naf saaxiibkiisa, dadka qaba fiirin kasta oo ay dareemaan?
saaxiibkiisa Soul, kaas oo la sheegay in ay ku xiran nafta uga noqdeen nolosha hore, shirka mar kasta ku cel-reincarnation marar badan, ayaa dhisay xiriir dhow. Sidaa darteed, ay u badan tahay in ay la kulmaan in Adduunyo waa mid aad u sarreeya, Dadka qaar waxay u dhisay xiriir wanaagsan mar hore la kulmay, dadka qaar ayaa hadda ka dib la kulmi doontaa.
ku saabsan saaxiibkiisa naf, waxaa jira siyaabo dhowr ah inaad u sheegto waa. Dareenka dhacda naftaada in marka aad qofka tahay, waxa la sheegay in ay wax caadi ah in dadka aan la kulmay in saaxiibkiisa Seoul. Intaa waxaa dheer, waxaa loo arki karaa ka eegtaa sida iyo dareenka.
markii aan la saaxiibkiisa nafta la kulmay, anigu ma doonayo inaan ka maqnaado kulanka. In halkan, waxaan eegi doonaa, oo ay ku jiraan fiirin iyo dareenka of sida loo aqoonsan karo saaxiibkiisa naftiisa. In
fiirin iyo u sheegto sida saaxiibkiisa nafta in ay eegaan ka jawiga
, Waa Maxay Waxay iyo Sida loo aqoonsado saaxiibkiisa nafta loo arki karaa ka soo fiirin iyo dareemaan.
? eeg fahamsan yahay in
tusaale ahaan, waxay noqon lahayd dad badan oo nooca eegno jecel yahay in uu. Waxa kale oo aan caadi ahayn si ay u noqdaan sida dadka in ay u saftay. Laakiin marka la eego saaxiibkiisa nafta, waxaad had iyo jeer eegi kartaa inta badan ma aha in ay nooc gaar ah. Dadka dhab oo kulmay ay isku naf, inkastoo aan ii ahaa nooca markii aan la kulmay markii ugu horeysay, waxaan idinku leeyahay si fiican yahay in ay bartey lagu soo jiidatay. In
, oo waxaad ku tidhaahdaa in ama aan la kala saaro saaxiibkiisa naf muuqaalka inay sameeyaan, waa qayb yar, laakiin waa aragti uu hogaaminaya in dadka qaab ama timirta gacanta, bar ah, sida xagashada la mid ah. Dadkii ka qaatay waqti isku mid ah ka dheer ka hor, sida qayb yar yimaado mid ah dabiiciga ah. Dadka u yeedho iyo
saaxiibkiisa naftaada waa lagu arkay
? jawiga waxaa inta badan ku yidhi naftayda iyo jawiga waa sida. Haddii ay jiraan wada-hawlgalayaasha oo lagu yaqaano dadka ka wareegsan, kaliya waxaa laga yaabaa in ay Dadka laga yaabaa naf saaxiibkiisa. A naf saaxiibkiisa, shakhsiyadda iyo qiyamka, maxaa yeelay, waxaad tidhaahdaan, Waxaad badan ee caadiga ah, sida fikirka iyo wada hadalka ee Isbadalo, waxaad tidhaahdaan, Waxaad sidoo kale shaki jawiga yimaado la mid ah.
sababtoo ah waa sidan la mid ah laba qof halka ay ka jirto inta badan waa, mid doono oo wehelkaaga ah Sida loo aqoonsado sidoo kale sababta oo ah waxa uu leeyahay jawiga dejiyaan sababta oo wada isagoo. Dadka qaba jawiga in joogi kartaa qaabka dabiiciga ah ee iyaga u gaar ah oo aan ka walwalayn ku saabsan yahay, waa wehelkaaga tahay.
kulmaan ayaa sidoo kale Adduun in saaxiibkiisa qofkaas ayaa marar badan Meguria '
si ay u daboolaan saaxiibkiisa nafta ka, waa in ay awoodaan in ay nafta is jiitaan. Sidaa darteed, haddii dawladda, taas oo shanqarta aura ah oo ka mid ah naftiisa, dhow iman doona jiitay in xitaa ay isku naf. Naf
of aura waa wax la timaada marka uu wanaagsan yahay soo iftiimay. Sida shaqada iyo hiwaayadaha, marka aad dareen ku saabsan shaqo adag ka dareen run ah, naf saaxiibkiisa Haddii ogaanaya laga yaabo in ay soo muuqday hore ee indhaha.
Sida dhadhanka, marka aad shaqo adag ka dareenka dhabta ah hamiday, naf saaxiibkiisa gubanaya Haddii ogaanaya laga yaabo in ay soo muuqday hore ee indhaha.